Home » Creative Writing » စဉ်းစားကြည့်ပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရယ်
View all posts by Alincho →
အပျိုကြီးက အပျိုကြီးပေမို့ အပျိုကြီးဆီမှာ အပျိုကြီးဖြစ်နည်း သင်ပေးနိုင်အောင် အပ်တာပဲ ဟာပဲ ဟာပဲ ကို…..
အမှန်တော့…လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသာ…. သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်… မျှကြည့်တတ်တဲ့
အပျိုကြီး လူပျိုကြီးများရဲ့ ဒုက္ခ
ဖတ်ရတာ ချစ်ဖို့ကောင်း လိုက်တာ။
​အလင်းချို​ရေ က​လေး​တွေက သူတိုချစ်​ခင်​​လေးစားတဲ့လူရဲ့စကားဆို
.တီခင်ဇော်ရေ ၀ဋ်လိုက်မှာဆိုးလို့ မသင်ပေးပါရစေနဲ့လို့။
အပျိုကြီးတွေတိုးမယ့်သဘောကြားရသိရတိုင်း… ဗမာလူပျိုယောက်ျားတွေအသုံးမကျပုံ… တွေးမိ..။
တိန်! တိုင်းပြည်အတွက် ယောင်္ကျားယူရမလိုလို…:-p
အမ်! စေ့စေ့တွေးမှ ရေးရေးပေါ်လာတယ်။ သူဂျီးပြောတာမမှန်ပါဘူးဗျို့။ ရန်ကုန်မှာ မိုးရွာနေတယ်သူဂျီးရေ၊ စက်ကွင်းမလွတ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့လို့ :-p:-p
စဉ်းဆားကျိ မြင်းနွားသိ ရင်းထားမိ ကျင်းနားထိ
ဒီက​လေးတွေက ရှေ့မှာ ဥပမာတွေမြင်နေ​တော့ အဲ့သည်​တရားကို တိုးမယ်​မထင် :loll:
တကယ်က အချစ်မရှိပဲနေရတဲ့ ဘ၀က .. သစ်ခြောက်ပင်ကြီးလိုပဲ..ငရဲဗျ …မစိမ်းလန်းဘူး…အဟိဟိ အကြင်နာတွေ ပန်းခင်းကြီးအဖြစ်ဖူးပွင့်ဖို့ …ရေခံမြေခံလိုသဗျ…. ဆိုင်သလားမဆိုင်လားတော့မသိ ..
…မှတ်ချက်.. တဂျားမပါ… တဲ့။
ကြည့်စမ်း လိမ္မာလို့ သိကြားမင်းတောင်ဖြစ်နေတဲ့သူကို အခမဲ့ကြော်ငြာပေးလိုက်တာက
ကြည့်စမ်း လိမ္မာနေတဲ့ကလေးကို ၀ိုင်းပြီး ဆေးထိုးနေကြတယ် ဟွင်င်င်း :-)))
အမည် … အလင်းချို
ဒီရွာထဲမှာ နာမည်ကြီးမြားနတ်မောင်တစ်ယောက်ရှိသတဲ့ အလင်းချိုရေ
ဒီတော့ ရှာဖွေစုံစမ်း ဆက်သွယ်လိုက်ပါလေ ၊